Turkiga oo Gurmad Caafimaad u diray Mareykanka. – Banaadir Times
By banaadir 20th March 2020 114
Dowladda Turkiga ayaa gargaar caafimaad u dirtay dalka Mareykanka oo haatan kamid ah dalalka la daalaa dhacaya xanuunka corona.
Gargaarkan ayaa ah qalabka lagu baaro xanuunka corona oo gaaraya 500,000 oo Turkiga uu u diray dalka Mareykanka.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xukuumadda Washington ay Ankara ka codsatay in laga caawiyo qalabkaas, waxaana arrintan xaqiijiyay wasiirka caafimmaadka ee Turkiga, Fahrettin Koca sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Mr Koca ayaa mar uu khudbad ka jeedinayay baarlamaanka wadankaas waxaa uu sheegay in ay ku han weyn yihiin sidii loo xoojin lahaa baaritaanada gudaha dalka Turkiga.
Wasiirka ayaa sheegay in maalintii ay qorsheynayaan in ay xanuunka ka baaraan 10 kun ilaa 15 kun oo qof, wuxuu intaa raaciyay in haatan ay baareen dad ka badan 10 kun.
Xanuunka corona ayaa fara ba’an ku haya dalal badan oo caalamka, waxaana ugu daran dalka Talyaaniga oo dad badan ay ugu dhinteen.
Caabuqa corona ayaa dalka Talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalalka kale ee caalamka, kadib markii maalin keliya ay dalkaas ku dhinteen dad gaaraya 427 qof.
Tirada dhimashada ee dalkaas ayaa haatan mareyso 3,405, taas oo ka badan tirada dadka ku dhintay dalka Shiinaha oo ah halka markii hore uu ka bilawday.
Dalka Shiinaha ayaa waxaa xanuunkaas ugu dhintay 3,245 qof balse waxaa su’aal la gelinayaa sax ahaanshaha tiradaas, maadaama aysan jirin cid si madaxbanaan u xaqiijin karta.
Dhammaan shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray in ay guryahooda ku nagaadaan.
Inkastoo ay jiraan tallaabooyin ay soo rogtay dowladda, haddana waxaa lasoo sheegay in ay jiraan dad wali u dhimanaya xanuunka, waxaana guud ahaan corona caalamka ugu geeriyootay dad gaaraya sagaal kun oo qof.
Dhanka kale dowladda Shiinaha oo ah halka markii hore lagu arkay xanuunka ayaa sheegtay in aysan jrin kiisas cusub oo lagu arkay gudaha dalkaas balse ay jiraan dad qaba xanuunka oo Shiinaha uga yimid dibadda.
Haseyeeshee tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa aad uga badan tan Talyaaniga oo dalkaas waxaa uu xanuunka haleelay 81 kun, halka Talyaanigana uu marayo 41,035.
VIDEO: Xildhibaanada Somaliland oo Farmaajo ugu Hanjabay Dil kadib Riyadii Safarkii Hargeysa